mai 2018 - Page 2 sur 66 -
Fizahantany : Maro ireo tolotra manokana ho an’ny mpandraharaha mandritra ny ITM
31/05/2018 admintriatra 0
Hetsika fanao isan-taona ho fampiroboroboana ny fizahantany. Hotanterahina manomboka anio, ary tsy hifarana raha tsy ny 3 jona izao ny hetsika iraisam-pirenena ho an’ny fizahantany na ny ITM (Internationa Tourism Fair Madagascar) etsy amin’ny Village …Tohiny
Befotaka Atsimo : Zandary miisa roa indray lavon’ny dahalo
Mirongatra tsy misy ohatra izany ny tsy fandriam-pahalemana any amin’ny distrikan’i Befotaka. Mpitandro filaminana miisa roa no fantatra fa maty amperin’asa nandritry ny fanarahan-dia dahalo tany amin’ny fokontany Ambohangimasy kaominina Bekofafa distrikann’i Befotaka Atsimo. Ny …Tohiny
Fandoroana 4×4 tany Mandoto : Olona 20 nalaina am-bavany
Olona miisa roapolo no efa nanaovana fanadihadiana mahakasika ny fandoroana fiara 4×4 ana orinasam-pifandraisana iray izay namita iraka tany Fidirana, distrikan’i Mandoto tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Raha ny fantatra, dia isan’ireo voarohirohy ho nandray …Tohiny
Ifanadiana : Lasan’ny dahalo ny basin’ilay zandary voatafika
Nisehoana fanafihana mitam-piadiana indray tany Ambomiera, distrikan’Ifanadiana omaly tokony ho tamin’ny 08 ora maraina ka zandary no lasibatra tamin’izany. Ankoatra ny faharatrana, vokatry ny zava-maranitra niantefa teo amin’ny faritry ny handriny, dia lasan’ireo olon-dratsy ihany …Tohiny
Tsy mitsahatra ary mitohy hatrany ny asa fampandrosoana izay tanterahina hoy ny Filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fandaharana fotoam-bita izay fanaony isaka ny zoma, nambarany tamin’ izany fa tsy voatery mitsahatra ny asa fampivoarana ...Tohiny
Asa sosialin’i Voahangy Rajaonarimampianina : Tohanan’ny mpiara-miombon’antoka matanjaka
Fifidianana 2018 : Tsy hilefitra amin’ny fanakorontanana ny Fitondrana